विपन्न परिवारलाई साँसदको उपहार : दशैं खर्च ४ हजार
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७६, आईतवार १३:५९
भनिन्छ, हुनेखानेकालागि दशैं, नहुनेलाई दशा । राप्तीसोनारी ८ बालापुरमा रहेका एक बिपन्न परिवारलार्इ पनि हरेक वर्षको दशैं दशा बनेर आउने गरेको थियो । आर्थिक विपन्नताका कारण अभिभावक विदेशीयपछि हजुरआमाको साहारामा बसेका दुई नाति नतिनालाई दशैंले नछोएको वर्षौ भयो । तर यस पटकको दशैं भने उनिहरुकालागि उत्साहजनक हुने भएको छ ।
बाँके क्षेत्र नं. १ का संघिय साँसद महेश्वर गहतराज अथकले मायाँ वि.क. का परिवारलाई दशैं खर्च ब्यवस्थापन गरीदिएका छन । केही महिना पहिले उनिहरुको शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी लिने घोषणा गरेका साँसद अथकले मायाको परिवारलाइ ४ हजार रुपैयाँ दशै खर्च उपलब्ध गराएका हुन ।
आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान छाडेका मायाँ र उनका दुई सन्तानलाई साँसद अथकले केहि महिना अघी विद्यालय भर्ना गर्नुकासाथै स्टेशनरीकालागी ५ हजार नगद उपलब्ध गराएका थिए । उनले तिनै जनाको सम्पूर्ण पढाई खर्च ब्यहोर्ने जिम्मा समेत लिएका छन ।
पढाइमा तिब्र ईच्छा राखेकी माया बालापुरकै जनशक्ति आधारभुत बिद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्यनरत छन भने उनका दुइ सन्तान सुवास बिक कक्षा ४ र छोरी सृष्टि कक्षा २ मा अध्यनरत छन ।